ICT for Myanmar: How we should think like StepN developer on move2earn apps?
How we should think like StepN developer on move2earn apps?
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ မှာ အိုင်ဒီယာတူပြီး စျေးကွက်ထဲမှာ ရှိပြီးသား Application တွေ နဲ့ မတူပဲ တမူ ထူးခြားတဲ့ Web 3.0 Blockchain အခြေပြု “StepN” ဆိုတဲ့ Move to Earn Application တခု ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီ App ဟာ အရင်ရှိပြီးသားတွေ နဲ့ မတူတာကတော့ အသုံးပြုသူက Runner Shoes, Jogger Shoes, Walking Shoes ဆိုတဲ့ NFT ဖိနပ်တွေ ဝယ်ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတာပါ။
လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်သလောက် GST token ပြန်ရပြီး ရလာတဲ့ Token တွေကို ပြန်ရောင်းခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေရစေတာပါ။ လူလဲ ကျန်းမာ၊ ဝင်ငွေလဲ ရ‌ပေါ့။
ဒီလို အိုင်ဒီယာ ကောင်းကောင်း နဲ့ ထွက်လာတဲ့ Application တခုကို ဖန်တီးရာမှာ စိန်ခေါ်မှုတွေ အမြောက်အမြားနဲ့ ကြုံခဲ့ရပါတယ်တဲ့။
အဲဒီအထဲက Technical Challenge တွေ အကြောင်းကို ကျတော်လဲ ပုံစံတူ Application တခုလုပ်ရင်းက စံနမူနာယူရင်း နဲ့ တခြားကျတော်နဲ့ ရင်ဘတ်ချင်း တူတဲ့သူတွေ ဖတ်မိအောင် ပြန်ဖောက်သည်ချလိုက်ပါတယ်။ StepN App Developer တွေ အနေနဲ့ Technical Challenge3ခုကို ဖြေရှင်းခဲ့ရပါတယ်တဲ့။
Technical Challenge 1 – Proof of Movement (POM)
Running Application, Wearable Gadget တွေ မှာ အသုံးပြုသူတွေ မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးနေလား၊ လိမ်ညာသုံးနေလား ဆိုတာကို စစ်ဖို့ anti-cheating system ဆိုတာ ထည့်မထားပါဘူး။ ဘာလို့ ထည့်မထားတာလဲ ဆိုတော့ မလိုအပ်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် တနေ့ကို ခြေလှမ်း ဘယ်နှစ်လှမ်း၊ အကွာအဝေး ဘယ်လောက် ရောက်အောင် လျှောက်နိုင်ရင် ဘာပေးမယ် ညာပေးမယ်ဆိုတဲ့ Incentive/Reward Program တွေ ပါလာတဲ့ အခါမှာ အဲ့လို စစ်ဆေးတဲ့ စနစ် မပါတာဟာ လူတွေ လိမ်ညာဖို့ ဖြစ်လာတာပါပဲ။ ဒီအတွက် Proof of Movement ဆိုတာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြရပါတယ်။ ဒီပြဿနာကို ပြေလည်အောင် ရှင်းဖို့က Developer တွေဟာ Gravity Sensor အပါအဝင်
· The linear acceleration sensor
· The significant motion sensor
· The accelerometer
· The gyroscope sensor
· The step detector sensor
· The step counter
စတာတွေကို အသုံးပြုပြီး ဖြေရှင်းကြရပါတယ်။ Sensor တွေ ဘာလို့ ဒီလောက် အများကြီး သုံးဖို့လိုလဲ ဆိုတာကို Sensor တခုချင်းစီ ရှင်းမပြတော့ပါဘူး။ မြင်သာနိုင်ဖို့ အောက်မှာ Gravity Sensor ကနေ 3D ပုံစံနဲ့ ရလာတဲ့ Wavepattern တွေကို ပြထားပါတယ်။ Mobile Phone ကို လက်ထဲကိုင်ထားပြီး လှုပ်နေတာရယ်၊ ဘောင်းဘီ ရှေ့အိတ်ထဲ ထည့်ပြီး သွားတာရယ် နဲ့ ရှပ် အင်္ကျီ အိတ်ကပ် ထဲ ထည့်ပြီးသွားတာရယ်မှာ Wavepattern တွေ က ဆင်တူနေတာကို တွေ့မှာပါ။
ဒါကြောင့် များပြားလှတဲ့ Sensor တွေရဲ့ အကူအညီ နဲ့ ပိုပြီးတိကျ တဲ့ ရလာဒ် ရဖို့ Three Factor Authentication Process ကို အသုံးပြုကြရပါတယ်။ Three Factor Authentication Process ဆိုတာက Mobile device ရဲ့ လှုပ်ရှားပုံ နဲ့ လူရဲ့ လှုပ်ရှားပုံ ကို pattern ကို စစ်တဲ့ mobile motion matches human movement wavelength၊ Mobile device ရဲ့ လှုပ်ရှားပုံ နဲ့ Mobile device က ရတဲ့ ခြေလှမ်း အရေအတွက် mobile motion matches mobile step counter၊ Mobile device ရဲ့ လှုပ်ရှားပုံ နဲ့ GPS လမ်းကြောင်း mobile motion matches GPS track သုံးခု က ရတဲ့ အချက်အလက်ကို အသုံးချ တာ ကို ဆိုလိုတာပါ။
Technical Challenge2– Proof of Distance
အကွာအဝေး အမှန်ကို ရဖို့ကို Step Counter နဲ့ GPS track ကနေ ရနိုင်ပါတယ်။ အဓိက ပြဿနာက Step Counter ကို လွယ်လွယ်ရနိုင်ပေမယ့် GPS က ရတဲ့ အချက်အလက်က ရာနှုန်းပြည့် မမှန်တာပါပဲ။ သစ်ပင်အောက်တို့ ၊ အဆောက်အအုံ တခုခုထဲ ရောက်နေတဲ့ Mobile Device ရဲ့ GPS data ဟာ မမှန်နိုင်ပါဘူး။ စမ်းသပ်ချက်တွေ အရကတော့ အခန်းတခုရဲ့ စားပွဲ‌ပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ Mobile Device ရဲ့ GPS data က အချိန်ကြာလေလေ နေရာ ရွေ့နေလေပါပဲ။ အပြင်မှာ ဆိုရင် ၃ မီတာကနေ မီတာ ၂၀ ထိတောင် ရွေ့နေတတ်ပါတယ်တဲ့။ ဒီ အခြေအနေကို GPS Drifting လို့ ခေါ်ပါတယ်။ GPS က Quality အနေနဲ့ လဲ Degrade ဖြစ်ပါသေးတယ်။ GPS Signal ပျောက်သွားတတ်တာ မျိုး ကြုံဖူးကြမှာပါ။ အဲ့လို ဖြစ်တဲ့ အခါ Re-route/ Re-calculate ပြန်လုပ်ရပါတယ်။ မျဉ်းဖြောင့်အတိုင်း သွားနေတာ မဟုတ်ပဲ အကွေ့ အကောက်နဲ့ သွားနေရင်း GPS Signal ပျောက်သွား တဲ့ အခါ Signal loss ဖြစ်သွားတဲ့ နေရာကနေ ပြန်ပေါ်လာတဲ့ နေရာ Point ၂ ခု ကို GPS က မျဉ်းဖြောင့် အတိုင်း ပြန်တွက်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ မှန်ကန်တိကျ တဲ့ အကွာအဝေးကို မရတော့ပါဘူး။
ဒါကို GPS Degrading ဖြစ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ မြင့်မားတဲ့ အဆောက်အဉီး တွေ ကြားထဲ ရောက်တဲ့ အခါမှာ GPS Signal တွေက Bounce ဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်တဲ့။ အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ အခါ Track Distance တွေက ၂ ဆ ၃ ဆ ထိ တက်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲ့လို အခြေအနေကို GPS Bounce လို့‌ခေါ်ပါတယ်။ ဒီ GPS ပြဿနာတွေကို GPS drift corrective, environmental factor canceling နဲ့ player route planning algorithms တွေကို သုံး ပြီး ရှင်းကြပါတယ်။
Technical Challenge3– Hack Prevention
နောက်ဆုံး တခုကတော့ Android Emulator လို Mobile OS Emulator တွေသုံးပြီး Hack တာကို ရှင်းကြတာပါ။ User Experience ကို ထိခိုက်စေတဲ့ Captcha လိုဟာတွေ သုံးပြီး ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားတာတောင် မရခဲ့ပါဘူး။ နောက်ဆုံးမှာတော့ Machine Learning ကို သုံးပြီး ရှင်းခဲ့ရပါတယ်တဲ့။ ကဲ ဒါကတော့ StepN Developer တွေ နဲ့ အားကျနမူနာ ယူစရာကောင်းတဲ့ သူတို့ ရဲ့ Technical Challenge တွေကို ဖြေရှင်းကြပုံပါ။
တခြား Design Challenge အပါအဝင် Server, Storage, Communication စတာတွေ အများကြီး ကို ဖြေရှင်းကြရပါသေးတယ်။
ကျတော်က တော့ ကျန်တာတွေ ထက် အပေါ်က Technical Challenge ၃ ခုကို အရမ်းသဘောကျလို့ ဖတ်မှတ် စရာ တခုအနေနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်တာပါ။
အသေးစိတ် ဖတ်ချင်ရင်တော့ အောက်က လင့်မှာ သွားဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ https://stepnofficial.medium.com/how-did-we-build-the-worlds-first-move2earn-nft-game-in-four-months-fde4d13dfb18
Labels: Knowledgebase , Mobile
How we should think like StepN developer on move2e...